Bramley Hollow - I-Airbnb
Glaziers Bay, Tasmania, i-Australia
Le ndawo yokuhlala ejabulisayo enamakamelo okulala angu-2 isendaweni enhle ye-Huon Valley e-Glaziers Bay ezungezwe ukubukeka okuhlaba umxhwele kwe-Huon River kanye ne-Southwest Wilderness yasezintabeni. Ebekwe endaweni yasemaphandleni ethokomele epulazini lethu elincane elingokwemvelo, inqolobane enakho konke njengendawo yokuhlala yenza i-Bramley Hollow indawo ekahle yokudla isidlo sasemini eside e-Wig Pig Farm eseduzane noma indawo enokuthula enokufinyelela emadolobheni amancane athandekayo ase-Huon Valley nakho konke okudingeka bakunikezele ngemoto.
I-Bramley Hollow inamagumbi okulala ama-2 abanzi, ithokomele kakhulu icwebezela kabili kanye ne-heater yezinkuni, ikhishi elihlome ngokuphelele/indawo yokuhlala ene-wifi, igumbi lokugezela elishisayo elisesitayeleni, ukubukwa okumangazayo ukusuka emphemeni futhi iyindawo ethandekayo yokuvumela umsindo womhlaba. shabalala ngenkathi ujabulela ukubukwa okuhle kwasemaphandleni nasemfuleni. I-Bramley Hollow ayizilungele izingane njengoba sinedamu endaweni kanye ne-heater yezinkuni yasendlini engenasicishamlilo.
I-Glaziers Bay iyindawo ezolile futhi enhle emfuleni omkhulu i-Huon futhi iyidrayivu nje emfushane eya edolobheni elihle laseCygnet elinamakhafesi ayo amakhulu nakho konke okudingayo ukuze uqoqe. Sesiseduze nekhona ukusuka eFat Pig Farm emangalisayo lapho ungajabulela khona ukudla kwasemini okude noma izinkundla zokucobelelana ngolwazi ngezimpelasonto.
Ababungazi bakho, uBilly & Julie bazophendula ama-imeyili nemibuzo ngokushesha. Sihlala endlini ehlukene epulazini, ngakho-ke ngenkathi siqinisekisa ubumfihlo bakho ngesikhathi uhlala, siyatholakala ukuze siphendule imibuzo nezimo eziphuthumayo.
Ababungazi bakho, uBilly & Julie bazophendula ama-imeyili nemibuzo ngokushesha. Sihlala endlini ehlukene epulazini, ngakho-ke ngenkathi siqinisekisa ubumfihlo bakho ngesikhathi uhl…
Inombolo yepholisi: BSS/2020/246